တောင်ကြီး မတ် - ၂၄
အားကစားနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ကမ္ဘောဇအုပ်စု ကမ္ဘောဇအနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာ ဖောင်ဒေးရှင်း နှင့် Smile Asia Medical Mission တို့ပူးပေါင်း၍ မတ် ၂၄ ရက် နံနက် ၉ နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးဆေးရုံကြီးတွင် နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲ ကလေးငယ်များအားခွဲစိတ်ကုသမှုပြုလုပ်ပေးကြောင်းသိရသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ကမ္ဘာပေါ်တွင် နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲ ကလေးသူငယ် (၁၇၀၀၀၀)ကျော် မွေးဖွားလျက်ရှိပြီး၊ မွေးဖွားမှု ၇၀၀ တွင် မွေးရာပါ နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲ ကလေး(၁) ယောက်ပါဝင်မွေးဖွားလျက်ရှိကြောင်းနှင့် အဆိုပါကလေးငယ်များသည် အစာစားခြင်း၊ အသက်ရှုခြင်း၊ စကားပြောခြင်းတို့တွင် အခက်အခဲဖြစ်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲ ကလေးငယ်တစ်ဦး မွေးဖွားခြင်းတွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်သက်နုစဉ် ကာလအတွင်းအစပြု၍ မွေးဖွားလာခြင်းမှာ အကြောင်းမျိုးစုံရှိပြီး၊ မျိုးရိုးဗီဇနှင့် အခြားအချက်များတွင် ပေါင်းစုမိသွားပါက နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲ ကလေးငယ်တစ်ဦးမွေးဖွားလာနိုင်ပါကြောင်း၊ မိခင်တွင် ဆီးချိုရောဂါ၊ အာဟာရချို့တဲ့ရောဂါ၊ ဆေးလိပ်/ အရက်သောက်သုံးသူ၊ အတက်ရောဂါရှင်ဖြစ်ပါက သောက်သုံးသည့်ဆေးဝါးသည် ကိုယ်ဝန်သက်နုစဉ်ကာလမှာ ကလေးငယ်၏ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေသောကြောင့် မွေးဖွားလာသည့်အချိန်တွင် နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲ ကလေးငယ် တစ်ဦးမွေးဖွားရန် အခွင့်အလမ်းပိုများစေကြောင်း၊ ကလေးငယ်များအတွက် ပို၍ ကောင်းမွန်သော အနာဂတ်ကို ဖန်တီးပေး နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စင်ကာပူနိုင်ငံအခြေစိုက် Smile Asia Medical အဖွဲ့က အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွင် မွေးရာပါ နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲ ကလေးငယ်များကို ခွဲစိတ်ကုသပေးနေသည့်အတွက် လေးစားဂုဏ်ယူကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ကမ္ဘောဇအုပ်စု ကမ္ဘောဇအနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာ ဖောင်ဒေးရှင်းက ရှမ်းပြည်နယ်တွင်လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတို့ကို အားသွန်ခွန်စိုက်လုပ်ဆောင်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပြီး၊ ကျန်းမာရေးအထောက် အကူအဖြစ် တောင်ကြီးမြို့တွင် သံဃာဆေးရုံ၊ ခိုလမ်မြို့တွင် ကုတင် (၁၀၀)ဆေးရုံ၊ ဘော်ဆိုင်းတိုက်နယ်ဆေးရုံတို့အတွက် ဆေးရုံအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းအပြည့်အစုံနှင့် ဆရာဝန်၊ သူနာပြုများအတွက် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကိုပါ လှူဒါန်းပေးသည့် အတွက် များစွာဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်သာမက မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲ ကလေးငယ် များ၏ ဘဝလှပချောမွေ့အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ကြရန် အမှာစကား၌ပြောကြားသွားသည်။
ဆက်လက်၍ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာစင်ကာပူသံရုံးမှ Deputy Chief of Mission ဖြစ်သူMr. David Liang မှ အမှတ်တရ စကားပြောကြားပြီး၊ အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးအထူးကုဆေးရုံမှဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာမြတ်ခိုင်၊ Smile Asia Programme Manager ဖြစ်သူ Ms. Phoebe Low ၊ နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲလူနာ မောင်ရဲမာန်အောင်၏ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးအောင်ညွှန့်တို့က ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားကြပြီး၊ The Smile Mission Ltd Executive Director Mr. Aphimanyu Talukdar က ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ ဒုတိယအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ ဒေါ်နန်းလိုင်းခမ်းအား Certificate of Appreciation ပေးအပ်၍ လည်းကောင်း၊ ဆေးရုံမျက်နှာစာသုံးထပ်ဆောင်ရှေ့ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းရန် ငွေကျပ်(၇၁၇၀၅၈၃)သိန်း လှူဒါန်းမှုအတွက် အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးအထူးကုဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာမြတ်ခိုင်က ကမ္ဘောဇအနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာ ဖောင်ဒေးရှင်းသို့ ဂုဏ်ပြုလွှာပေးအပ်ပြီး၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ဇနီး၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ တာဝန်ရှိသူတို့သည် ခွဲစိတ်ကုသမည့် နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲလူနာများအား ကြည့်ရှုအားပေးစကားပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါ ကမ္ဘောဇအနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာ ဖောင်ဒေးရှင်း နှင့် Smile Asia Medical Mission တို့ပူးပေါင်း၍ နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲ ကလေးငယ်များအားခွဲစိတ်ကုသမှုပြုလုပ်ပေးမည့် ဆရာဝန်များမှာ အမေရိကန်၊ ဂျာမနီ၊ တရုတ်၊ စင်ကာပူ၊ ဒိန်းမတ်၊ ပြင်သစ်၊ သြစတေးလျ၊ ဂျပန်၊ ဟောင်ကောင်၊ မြန်မာ၊ ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံတို့မှ ဆရာဝန်များနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း စုစုပေါင်း(၃၅)ဦးပါဝင်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ တောင်ကြီးမြို့တွင် တတိယအကြိမ်ခွဲစိတ်ကုသပေးခြင်းနှင့် မတ် ၂၄ ရက်မှ မတ်၃၀ ရက်နေ့အထိ အခမဲ့ခွဲစိတ်ကုသပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ကမ်ဘောဇအုပျစု ကမ်ဘောဇအနာဂတျအလငျးတနျးမွနျမာဖောငျဒေးရှငျးမှ နှုတျခမျးကှဲ၊ အာခေါငျကှဲ ကလေးငယျမြားအား ခှဲစိတျကုသပေး
တောငျကွီး မတျ - ၂၄
အားကစားနှငျ့ ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာန၏ လမျးညှနျမှုဖွငျ့ ကမ်ဘောဇအုပျစု ကမ်ဘောဇအနာဂတျအလငျးတနျးမွနျမာ ဖောငျဒေးရှငျး နှငျ့ Smile Asia Medical Mission တို့ပူးပေါငျး၍ မတျ ၂၄ ရကျ နံနကျ ၉ နာရီက တောငျကွီးမွို့၊ အမြိုးသမီးနှငျ့ ကလေးဆေးရုံကွီးတှငျ နှုတျခမျးကှဲ၊ အာခေါငျကှဲ ကလေးငယျမြားအားခှဲစိတျကုသမှုပွုလုပျပေးကွောငျးသိရသညျ။
ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျ ဒေါကျတာလငျးထှဋျက ကမ်ဘာပျေါတှငျ နှုတျခမျးကှဲ၊ အာခေါငျကှဲ ကလေးသူငယျ (၁၇၀၀၀၀)ကြျော မှေးဖှားလကျြရှိပွီး၊ မှေးဖှားမှု ၇၀၀ တှငျ မှေးရာပါ နှုတျခမျးကှဲ၊ အာခေါငျကှဲ ကလေး(၁) ယောကျပါဝငျမှေးဖှားလကျြရှိကွောငျးနှငျ့ အဆိုပါကလေးငယျမြားသညျ အစာစားခွငျး၊ အသကျရှုခွငျး၊ စကားပွောခွငျးတို့တှငျ အခကျအခဲဖွဈလကျြရှိပါကွောငျး၊ နှုတျခမျးကှဲ၊ အာခေါငျကှဲ ကလေးငယျတဈဦး မှေးဖှားခွငျးတှငျ ကိုယျဝနျဆောငျသကျနုစဉျ ကာလအတှငျးအစပွု၍ မှေးဖှားလာခွငျးမှာ အကွောငျးမြိုးစုံရှိပွီး၊ မြိုးရိုးဗီဇနှငျ့ အခွားအခကျြမြားတှငျ ပေါငျးစုမိသှားပါက နှုတျခမျးကှဲ၊ အာခေါငျကှဲ ကလေးငယျတဈဦးမှေးဖှားလာနိုငျပါကွောငျး၊ မိခငျတှငျ ဆီးခြိုရောဂါ၊ အာဟာရခြို့တဲ့ရောဂါ၊ ဆေးလိပျ/ အရကျသောကျသုံးသူ၊ အတကျရောဂါရှငျဖွဈပါက သောကျသုံးသညျ့ဆေးဝါးသညျ ကိုယျဝနျသကျနုစဉျကာလမှာ ကလေးငယျ၏ဖှံ့ဖွိုးမှုကို အဟနျ့အတားဖွဈစသေောကွောငျ့ မှေးဖှားလာသညျ့အခြိနျတှငျ နှုတျခမျးကှဲ၊ အာခေါငျကှဲ ကလေးငယျ တဈဦးမှေးဖှားရနျ အခှငျ့အလမျးပိုမြားစကွေောငျး၊ ကလေးငယျမြားအတှကျ ပို၍ ကောငျးမှနျသော အနာဂတျကို ဖနျတီးပေး နိုငျရနျ ရညျရှယျခကျြဖွငျ့ စငျကာပူနိုငျငံအခွစေိုကျ Smile Asia Medical အဖှဲ့က အရှတေ့ောငျအာရှနိုငျငံတှငျ မှေးရာပါ နှုတျခမျးကှဲ၊ အာခေါငျကှဲ ကလေးငယျမြားကို ခှဲစိတျကုသပေးနသေညျ့အတှကျ လေးစားဂုဏျယူကြေးဇူးတငျရှိပါကွောငျး၊ လမျးညှနျမှုဖွငျ့ ကမ်ဘောဇအုပျစု ကမ်ဘောဇအနာဂတျအလငျးတနျးမွနျမာ ဖောငျဒေးရှငျးက ရှမျးပွညျနယျတှငျလူမှုစီးပှားဖှံ့ဖွိုး တိုးတကျရေးနှငျ့ ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှုတို့ကို အားသှနျခှနျစိုကျလုပျဆောငျနသေညျကို တှရှေိ့ရပွီး၊ ကနျြးမာရေးအထောကျ အကူအဖွဈ တောငျကွီးမွို့တှငျ သံဃာဆေးရုံ၊ ခိုလမျမွို့တှငျ ကုတငျ (၁၀၀)ဆေးရုံ၊ ဘျောဆိုငျးတိုကျနယျဆေးရုံတို့အတှကျ ဆေးရုံအသုံးအဆောငျပစ်စညျးအပွညျ့အစုံနှငျ့ ဆရာဝနျ၊ သူနာပွုမြားအတှကျ အသုံးအဆောငျပစ်စညျးမြားကိုပါ လှူဒါနျးပေးသညျ့ အတှကျ မြားစှာဝမျးမွောကျဂုဏျယူမိပါကွောငျး၊ ရှမျးပွညျနယျသာမက မွနျမာနိုငျငံတှငျးရှိ နှုတျခမျးကှဲ၊ အာခေါငျကှဲ ကလေးငယျ မြား၏ ဘဝလှပခြောမှအေ့ောငျဆောငျရှကျပေးနိုငျကွရနျ အမှာစကား၌ပွောကွားသှားသညျ။
ဆကျလကျ၍ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာစငျကာပူသံရုံးမှ Deputy Chief of Mission ဖွဈသူMr. David Liang မှ အမှတျတရ စကားပွောကွားပွီး၊ အမြိုးသမီးနှငျ့ ကလေးအထူးကုဆေးရုံမှဆေးရုံအုပျကွီး ဒေါကျတာမွတျခိုငျ၊ Smile Asia Programme Manager ဖွဈသူ Ms. Phoebe Low ၊ နှုတျခမျးကှဲ၊ အာခေါငျကှဲလူနာ မောငျရဲမာနျအောငျ၏ ဖခငျဖွဈသူ ဦးအောငျညှနျ့တို့က ကြေးဇူးတငျစကားပွောကွားကွပွီး၊ The Smile Mission Ltd Executive Director Mr. Aphimanyu Talukdar က ကမ်ဘောဇဘဏျ၏ ဒုတိယအမှုဆောငျအရာရှိခြုပျဖွဈသူ ဒျေါနနျးလိုငျးခမျးအား Certificate of Appreciation ပေးအပျ၍ လညျးကောငျး၊ ဆေးရုံမကျြနှာစာသုံးထပျဆောငျရှေ့ ကှနျကရဈလမျးခငျးရနျ ငှကေပျြ(၇၁၇၀၅၈၃)သိနျး လှူဒါနျးမှုအတှကျ အမြိုးသမီးနှငျ့ ကလေးအထူးကုဆေးရုံအုပျကွီး ဒေါကျတာမွတျခိုငျက ကမ်ဘောဇအနာဂတျအလငျးတနျးမွနျမာ ဖောငျဒေးရှငျးသို့ ဂုဏျပွုလှာပေးအပျပွီး၊ ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျနှငျ့ ဇနီး၊ ပွညျနယျဝနျကွီးမြား၊ တာဝနျရှိသူတို့သညျ ခှဲစိတျကုသမညျ့ နှုတျခမျးကှဲ၊ အာခေါငျကှဲလူနာမြားအား ကွညျ့ရှုအားပေးစကားပွောကွားခဲ့ကွောငျးသိရသညျ။
အဆိုပါ ကမ်ဘောဇအနာဂတျအလငျးတနျးမွနျမာ ဖောငျဒေးရှငျး နှငျ့ Smile Asia Medical Mission တို့ပူးပေါငျး၍ နှုတျခမျးကှဲ၊ အာခေါငျကှဲ ကလေးငယျမြားအားခှဲစိတျကုသမှုပွုလုပျပေးမညျ့ ဆရာဝနျမြားမှာ အမရေိကနျ၊ ဂြာမနီ၊ တရုတျ၊ စငျကာပူ၊ ဒိနျးမတျ၊ ပွငျသဈ၊ သွစတေးလြ၊ ဂပြနျ၊ ဟောငျကောငျ၊ မွနျမာ၊ ဖိလဈပိုငျ နိုငျငံတို့မှ ဆရာဝနျမြားနှငျ့ စတေနာ့ဝနျထမျး စုစုပေါငျး(၃၅)ဦးပါဝငျပွီး ရှမျးပွညျနယျတောငျပိုငျး၊ တောငျကွီးမွို့တှငျ တတိယအကွိမျခှဲစိတျကုသပေးခွငျးနှငျ့ မတျ ၂၄ ရကျမှ မတျ၃၀ ရကျနအေ့ထိ အခမဲ့ခှဲစိတျကုသပေးသှားမညျဖွဈကွောငျး သိရှိရသညျ။